Taajir Maraykanka ah oo dhisayay god uu ka galo Nuclear oo la dacweeyay - Caasimada Online
Home Warar Taajir Maraykanka ah oo dhisayay god uu ka galo Nuclear oo la...
Taajir Maraykanka ah oo dhisayay god uu ka galo Nuclear oo la dacweeyay
Nin taajir ah oo u dhashay dalka Maraykanka kaas oo gurigiisa hoostiisa ka qodayay god weyn oo uu ka galo haddii uu dhoco weerar Niyuukleer ayaa lagu furay dacwo dil ah, kadib markii uu dhintay ninkii uu usoo kireystay in uu godkaas u qodo.
Ninkan oo lagu magacaabo Daniel Beckwitt oo 27 jir ah ayaa qodayay godkan cabsi uu ka qabo weerarka Niyuukleer ah oo adduunka ka dhaca awgiis, balse ninkii godka u qodayay Askia Kafta oo 21 jir ayaa ku dhintay kadib markii uu gudaha godka dab ka kacay.
Booliiska ayaa Daniel ku eedeeyay dacayaad iyo beylah uu ku sameeyay nafta bini’aadamka.
Godka oo guntiisa dhanayn 60 mitir ayaa hoos u qodkaa illaa 20 fiit , kana hoos qodkaa guriga ninkan oo ku yaala magaalada Washington.
Waxa ay booliiska sheegeen in markii dabka kacay uu ninkan guriga ka baxsaday, balse uu ka gaabiyay in kooxaha gargaarka degdega ah uu u sheego in qof kale meesha ku xayiranyahay.
Waxaa kale oo la sheegay in Mr. Daniels uu sameeyay isku day kasta oo suurtogal ah oo ninka dhintay ee u shaqayn jiray uuga kaga habaabinayo in uu aqoonsado halka uu guriga ku yaalo, isaga oo saacado gaariga ku marin jiray waddooyinka, kadibna guriga ka galin jiray meel uusan fahmi karin.
Dhimasha ayaa dhacday sanadkii 2017-kii, balse hadda ayaa baaritaanka lasoo gabogabeeyay, waxaana la sheegay in maalmo dhan uu ninka dhintay ka shaqayn jiray gudaha godka, halkaas oo uu wax ku cuni jiray, suulina ka gali jiray isaga oo aanan banaanka usoo bixin sida ay sheegeen dacwad oogayaasha.
Waxaa jira dad badan oo Amerikan ah, oo uu ka midyahay madaxweynaha dalkaas oo guryahooda ka qotay godad ay ka galaan haddii uu dhoco weerar hubka Niyuukleerka.